Waaxda Haweenka QM oo kaashaneysa Kooxda Sharci yaqaanada Somaliland si Awood loo siiyo Haweenka | UNSOM
10:15 - 25 Feb
Waaxda Haweenka QM oo kaashaneysa Kooxda Sharci yaqaanada Somaliland si Awood loo siiyo Haweenka
Hargeisa – Waxda Haweenka QM iyo Ururuka Qareenada Haweenka Somaliland (SWLA) ayaa iska kaashanaya sidii ay haweenka fursad wanaagsan ugu heli lahaayeen nidaamka cadaaladdda iyo in sare loo qaado awoodda haweenka ee dhinaca sharciga.
“Haweenka QM waxa ay ku faraxsan yihiin in iskaashiga iyaga iyo SWLA uu gacan ka geysan doono sidii ay awoodsin dhinaca sharciga ah u heli lahaayeen dadka sida weyn xuquuqdooda loo duudsiiyo iyada oo loo marayo tababbaro la siinayo dadka is xilqaama, la siiyo taageero dhinaca sharciga ah iyo in la sameeyo isbahaysiyo abaabula bulshada, sameeya ol’ole siyaasadeed oo dhinaa sharci dejinta ah,” ayuu yiri Sadiq Syed oo ah maamulaha waaxda Haweenka QM.
Mas’uulka QM waxa uu ka hadlayey bilowgii toddobaadkan caasimadda Somaliland ee Hargeysa xilli lagu dhawaaqayey mashruuc loogu magacdaray ‘Fursad u heliida haweenka ee cadaaladda iyo awood u siinta dhinaca sharciga ee haweenka iyo gabdhaha Somaliland,’ kaas oo ay fulinayaan Waaxda Haweenka QM ioo kaashanaysa SWLA xilli dhaqaalaha ay baxinayaan uu bixinayo sanduuqa Multi-Partner Trust Fund (MPTF) iyo Joint Program on the Rule of Law.
Kelmedihii ay ka jeedisay qadada, gudoomiyaha SWLA, Ifraax Aadan Maxamed waxa ay hoosta ka xarriiqday awood u siinta dhinaca sharciga ee haweenka Somaliland iyada oo xustay shaqada SWLA. Ururukan waa urur sharci oo is xilqaan ah kaas oo sare u qaada xuquuqda haweenka iyada oo loo marayo in la xoojiyo fursadda ay u helaan cadalaadda. Waxa uu sidoo kale taageeraa dadaalada dhex dhexaadinta iyo dib u heshiisiinta, waxa uu bulshada u abaabulaa barnamijyada taageerada shacriga, waxa ay wax ka qabtaan gabood falada la xiriira jinsiga, waxa uu sidoo kale u ol’oleeyaa siyaasadda sharciyada awoodda siiya haweenka.
Sida uu qabo Haweenka QM, in meesha laga saaro waxyaabaha caqabada ku ah in haweenka ay fursad u helaan cadaaladda iyo in la xoojiyo sarreynta sharciga waxa ay udub dhexaad u tahay in awood sharciyadeed la siiyo haweenka Somaliland. Sababo ka xiriira wacyi-galin la’aan iyo fursadaha loo helo hay’adaha cadaaladda oo yar iyo iyada oo loo arko ceeb, haweenka waxa ay inta badan wajahaaan caqabado la xirira sidii ay fursad ugu heli lahaayeen nidaamka sharci si ay u aqoonsadaan xuquuqdooda ka muwaadin ahaan.
Haweenka, dhallinyarada iyo kooxo la tokooro waxa ay gaar ahaan caqabad kala kulmaan sidii ay fursad ugu heli lahaayeen hay’adaha cadaaladda, tani waxaa sabab u noqon kara wacyi-galinta la xirirta xuquuqda qof leeyahay oo aan jirin ama hay’adaha oo meesha aan ka jirin amaba ama helidoda aan la awoodin.
Mashruucan Waaxda Haweenka QM iyo SWLA oo xarumo ku leh Burco, Gabiley, Boroma iyo Hargeysa waxa uu ka koobnaan doonaa abaabulida bulshada iyo ol’ole wacyi-gali ah, bixinta adeeg garsoo oo lacag la’aan ah oo ay ka faa’iideysan doonaan ugu yaraan 300 oo haween ah kuwaas oo aan iska bixin Karin dhaqaalaha sharciga iyo dhisidda aqoonta iyo in 400 oo haween ah, oday dhaqameedyo, rag iyo dhallinyarada la siiyo tababbaro.
Waxaa intaas dheer, mashruuca waxa uu qorsheynayaa xoojinta xiriirka haweenka is xilqaamay si ay wacyi galin u sameeyaan iyo dabagalka iyo ka soo warbixinta kiisaska la xiriira tacadiyada ka dhanka ah xasaradaha jinsiga iyo nooc kas ah oo ah takoor lagu koco haweenka.
“Waa muhiim in la xaqiijiyo sinnaanta jinsiga ee garsoorka iyo waaxda ammaanka,” waxaa sidaas kulankii qadada ka yiri Md. Syed, xilli uu sidoo kale meesha ka sheegay khibradda uu u leeyahay shaqada haweenka qareenada ah ee dalka Afghanistan, Sudan, Ciraaq iyo wadamo kale.
 Saaxiibada Beesha Caalamka oo soo Dhoweeyay Kulanka ka Socda Dhuusamareeb
 Xiriirka Mudada Dheer Iyo Taageerada Dhinacyada Kala Duwan Ka Kooban Ee U Dhexeeya Qaramada Midoobay Iyo Somaliland Ayaa Looga Hadlay Booqashadii Qoyska QM Ee Hargeysa
Baaq Ku Aaddan Sii Socoshada Dadaallada Lagu Gaarayo Heshiis ay DFS-DGXF Ka Gaaraan Hirgelinta Doorashada
Muqdisho – Saaxiibbada Soomaaliya ee beesha caalamka* waxay ugu baaqayaan dhamaan saxiixayaasha heshiiskii 17kii Sebtember inay si deg-deg ah isugu yimaadaan si loo dhamaystiro hirgelinta hannaanka doorashada, iyad
Isaga Oo Ka Hadlaya Shirkii Golaha Ammaanka Ee Soomaaliya, Ergeyga Gaarka Ah Ee Qm Waxa Uu Bidhaamiyey Xiisadaha Siyaasadeed Iyo Baahida Loo Qabo Wadaxaajood
Muqdisho/New York, 22 Febraayo 2021–Siyaasadda murugsan ee haatan Soomaaliya ka taagan iyo baahida loo qabo wadaxaajood iyo isu-tanaasul si loo xalliyo ayuu aad uga hadlay maanta Ergeyga Qaramada Midoobay ee dalka kulankii Golaha Ammaanka.
Bayaan loo nisbeeyay Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ku aaddan Soomaaliya
New York – Xoghayaha Guud wuxuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dillaacay magaalada Muqdisho. wuxuuna ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan inay is xakameeyaan ayna is dejiyaan.